Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maslax Maxamed Siyaad oo qubado ka hor jeediyay mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya
Waxa si habsami leh uga socda guriga Umada Soomaaliya fadhigi mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee manta uga dhageysanayeen qudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta utaagan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Musharax Xasan Sheekh Maxamud iyo Maslax Siyaad Bare ayaa kamid ahaa musharaxiinti saakay jeedisay qudbadahooda ku aadan hanaanka ay doonayaan iney dalka kuhogaamiyaan marka loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Xasan Sheekh maxmaud ayaa kamid ah musharaxiinta ugu caansan utartamayaasha xilka madaxtinimada Soomaaliya bacdama uu magaalada Muqdisho geeska geesk lagu xardhay boorarka ugu waa weyn ee dhajiyeen taageerayaasha musharaxiinta.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale waxa uu yahay aqoonyahan door weyn kazoo ciyaaray sara uqaadida waxbarashada Soomalaiya isagoona laf dhabar ka ahaa Jaamacada SIMAD oo kamid ah jaamacadaha ugu waa weyn ee kajira magaalada Muqdisho.
Xasan waxa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono xaalada amaan , caafimad isla markaana uu la diriri doono Musuq maasuqa ladagay dalkeena Soomaaliya.
Dhanka kale waxa isna qudbad kooban jeediyay Jeneral Maslax maxamed Siyaad bare oo kamid ah musharaxiinta dalka Soomaaliya.
Mudane Maslax waxa uu kudheeraaday kasheekeenta mashaariicda uu dalka kazoo qabtay xiligi ay talineesya dowladi uu daadihinayay Alaah Unaxariistee aabihiis Maxamed Siyaad Bare.
Maslax waxa uu tilmaamay in wax laga naxo tahay sida uu yahay Muuqaalka Muqdisho oo ay ugu danbeesay sanadihi Sagaashameeyadi xiligaasi uu aad kaga duwanaa sida uu yahay.
Maslax waxa uu yiri xiliga aan Muqdisho katalinayay waxa heestay shirkad Dhismo taasi oo dhistay dhismooyin oo ilaa iyo hada bilicda magaalada safka hore kaga jiro dib danbana aan loo dayactirin kuwaasi oo tusalae usoo qaatay iney kamid yihiin tuulada Isboortiga ee Stadium Muqdisho.
Musharax Maslax ayaa tilmaamay in taladada utartamida xilka dalka inuu go’aasnsaday kadib marki uu dareemay inuu yahay kan kadhabeen kara niyada shacabka Soomaliyeed ee xiligaan umuuqda kuwa gaaray biseyl dhab ah.
Musharaxiinta maanta Khudbadaha jeedinaya ayaa waxay kala yihiin sidan: